Kuqhuma Machine, Shot xa kuthe kwakho imbabala System, Sandblasting Cabinet -. CO DX-nokuphalazeka kwelifu, LTD.
Iimveliso steel lakho kwizinga eliphezulu bafanelwe entanjeni umgangatho ophezulu, wethu advanced Shot xa kuthe kwakho imbabala System yenza kunokwenzeka. DX-udubulo ukuba izakhi ukuze ukuphatha kwakho imbabala kude ukungcoliseka komhlaba, namhlwa, isikali kunye nezinye ukungcola. Le nkqubo uqhushumbiso kushiya ngasemva egudileyo oluhlambulukileyo iimveliso zentsimbi imiphezulu, engile, iindawo okanye amacandelo ukuba ingqinelane nemigangatho ISO9001 yaye ilungele indibano okanye ukupeyinta.
Shot ugcinwa Izixhobo
ngokufutha Track shot Blaster , Hook Shot Blasting , Shot Blasting Machine , China Shot xa kuthe kwakho imbabala Machine , kuMgangatho Shot ngokufutha Ukucoca Machine , Road Suface Shot xa kuthe kwakho imbabala Machine ,